Shiinaha Nidaamka Nidaamka Biosafety ee Shiinaha ee loogu talagalay SARS-CoV-2 Antigen Soosaarayaasha Tijaabada Degdega ah iyo alaableyda | Liming Bio
TheStrongStep® SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test waa baaritaan dhaqso ah oo loogu tala galay baaritaanka COVID-19 antigen ee fayraska SARS-CoV-2 ee bararka bini'aadamka Cunaha / Nasopharyngeal swab. Baaritaanka waxaa loo adeegsadaa caawimaad lagu ogaanayo COVID-19.
Waxaa isticmaali kara shaybaarada caafimaadka ama shaqaalaha daryeelka caafimaadka oo keliya
Adeegsiga Xirfadleyda Caafimaadka Kaliya
Keen qaybaha xirmooyinka heerkulka qolka kahor baaritaanka. Fur boorsada oo ka saar qalabka baaritaanka.
Marka la furo, qalabka baaritaanka waa in isla markiiba la isticmaalo.
Calaamadee aaladda baaritaanka aqoonsiga bukaanka.
Fur daboolka qalabka.
1. Suufka geli tuubada, ku kala jaji suunka kala jajabka, suufka tijaabada leh ha ku dhaco tuubada oo iska tuuro usha kore.
2. Fur daboolka qalabka.
3. Jebi usha buluugga ah.
4. SI FIRLI ah u tuuji tubada buluuga ah, hubi in dareeraha oo dhami ay ku dhacaan tuubada hoose.
5. Qalabka si xoog leh u wareeji.
6. Qalabka rog, oo tusaalaha keydku ha u guuro marinka tijaabada.
7. Qalabka geli goobta shaqada.
8. Dhamaadka 15 daqiiqo akhri natiijooyinka. Muunad wanaagsan oo wanaagsan ayaa laga yaabaa inay soo bandhigto natiijo hore.
Fiiro gaar ah: Natiijada 15 daqiiqo kadib ma noqon karto mid sax ah.
1. Waxyaabaha ku jira xirmadan waa in loo adeegsadaa ogaanshaha tayada SARG-CoV-2 antigens-ka cunaha iyo suufka nasopharyngeal.
2. Tijaabadani waxay soo ogaaneysaa mid shaqeynaya (nool) iyo mid aan socon karin, SARS-CoV-2. Waxqabadka baaritaanka wuxuu kuxiranyahay xaddiga fayraska (antigen) ee muunada lagamana yaabo inuu xiriir laleeyahay natiijooyinka dhaqanka fayraska ee lagusameeyay isla muunada.
3. Natiijada baaritaanka ee xun ayaa dhici karta haddii heerka antigen-ka ee muunadku uu ka hooseeyo xadka ogaanshaha baaritaanka ama haddii tijaabada la soo ururiyay ama si khaldan loo qaaday.
4. Ku-guuldaraysiga in la raaco Nidaamka Imtixaanka ayaa saameyn xun ku yeelan kara waxqabadka imtixaanka iyo / ama burin karaa natiijada baaritaanka.
5. Natiijooyinka baaritaanka waa in lagu qiimeeyaa iyadoo lala kaashanayo xogta kale ee caafimaad ee uu heli karo dhakhtarka.
6. Natiijooyinka baaritaanka togan ayaan meesha ka saareynin la-qaadashada infekshannada kale ee cudurrada keena.
7. Natiijooyinka baaritaanka xun looma jeedin in lagu xukumo cudurrada kale ee aan ahayn SARS ee fayraska ama bakteeriyada.
8. Natiijooyinka taban waa in loola dhaqmaa sidii mala-awaal oo lagu xaqiijiyey baaritaanka khamriga ee loo oggol yahay FDA, haddii loo baahdo, maaraynta kiliinikada, oo ay ku jiraan xakameynta infekshinka.
9. Talooyinka xasilloonida saamiga waxay ku saleysan yihiin xogta xasilloonida ee laga helay baaritaanka hargabka iyo waxqabadku wuu ka duwanaan karaa SARS-CoV-2. Isticmaalayaasha waa inay tijaabiyaan tijaabada sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah ka dib ururinta muunada.
10. Dareenka tijaabada RT-PCR ee ogaanshaha COVID-19 waa kaliya 50% -80% sababo laxiriira tayada tusaalaha liita ama waqtiga cudurka xilliga wajiga laga soo kabanayo, iwm. SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Device Qalabka dareen ahaan waa aragti ahaan hoose sababta oo ah Habka ay.
Hore: SARS-CoV-2 Antigen Degdega Imtixaanka
Xiga: Qalabka Qalabka ee loogu talagalay SARS-CoV-2 & Hargabka A / B Combo Antigen Degdega ah
Qalabka Nidaamka Biosafety ee loogu talagalay Sars-Cov-2 Antigen Test
Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Multiplex Real-T ... Dhabarka
Qalabka Nidaamka Biyosafety-ka ee loogu talagalay SARS-CoV-2 Ant ...
Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Qalabka Coronavirus Antigen Test,